Ngingabheka kanjani ikhasi lami lamanje le-SEO?
Ngivame ukuzwa imibuzo mayelana nokuhlola inqubekelaphambili yamanje noma ukulinganisa i-website ye-SEO score ngokwayo. Kodwa ingabe bayayenza noma kunjalo? Uma ngikhuluma ngokukhululekile, angiqiniseki ukuthi kukhona yini okuhle, noma i-SEO score embi ngemuva kwakho konke. Eqinisweni, umqondo we-Search Engine Optimization ukhulu kakhulu, ngezici eziningi kakhulu zeseqhinga elisebenzayo elidinga ukuqonda okucacile ukushayela iwebhusayithi yakho indlela yokuphumelela kwangempela ekusezingeni le-intanethi. Kulungile, kubonakala sengathi ukuphendula umbuzo mayelana ne-SEO score measurement kuba cishe akudingeki. Eqinisweni, ayikho ideshibhodi eyabelwe eyenziwa yizinjini zokusesha ukuze siqhathanise amaphuzu wewebhusayithi ngayinye ngokumelene nezinye eziqondene nomkhakha wezemboni, noma okungenani niche emakethe efanayo. Futhi azikho amathuluzi okusebenza noma amapulatifomu ahlanganisiwe ukuze enze ukuhlaziywa okufanako kubo bonke: izixhumanisi, ezinye izibonakaliso zomphakathi, izici eziyinhloko zobuchwepheshe be-SEO, inani lamaphutha e-page, isivinini sokulayisha ikhasi, ukungabi namathegi ahlukene ikhwalithi yokuqukethwe ngokwayo. Ngakho hlobo luni lwempendulo esingayithola? Ake sizame ukubona ukuthi yini esingayenza nge-SEO score ngokuqinisekile.
Singakwazi ukuqhathanisa izinto ezibalulekile ze-website yakho ye-SEO ngokumelene nabancintisana nabo abaseduze kakhulu.
Ukukhuluma mayelana nezisekelo eziyisisekelo, ngiphakamisa ukuqhathanisa ukusebenza kwakho kwamanje kwewebhu ngokuya kwedatha eningi yabamelene nawe. Singakwazi ukutadisha izimoto zabo ezivela emaceleni angukhiye ehlosiwe embonini efanayo, kanye nababukeli bemakethe basebenzisa le mishwana ebalulekile uma befuna imikhiqizo noma amasevisi. Ngokwenza ngale ndlela, uzokwazi okungenani ukubona ukuthi uhamba ngendlela efanele, noma mhlawumbe uzodinga ukuqasha ochwepheshe be-fix fix. Ngisho lapha ukuthi ukuthola i-SEO yakho isebenza ngaphandle kwesinye isikhathi kungenziwa kahle, hhayi ukusho kuphela isinqumo sokusinda.
Singakwazi ukutadisha isipiliyoni esihle kakhulu sabaphikisi bakho futhi uzizwe ukhululekile ukuzisebenzisa.
Ngikholelwa ukuthi ukubona ukucaciswa okucacile kobufakazi obusenkundleni yokuncintisana yakho futhi ukufaka isicelo sendlela ephumelela kakhulu ngokuvamile kuyisisombululo esicacile nesicacile sokuthuthukisa i-SEO score yakho. Noma kunjalo, angisho lapha ukusebenza njenge-copycat. Vele ugxile ezintweni eziphumelelayo kakhulu futhi uqale ukubenza baphile emakhasini akho ewebhu. Cabanga nje, isitha sakho esinamandla sithola izinzuzo ezinhle kwezinye zezokuxhumana ezithandwayo. Ngakho-ke kungani ungalandeli ukulandela futhi uqhube i-SEO score yakho ngezinto ezifanayo zokusetshenziswa, ezifana nokuthanda, ukukhuluma, kanye nokwabelana ku-Facebook, isibonelo?
Singakwazi ukubona ukuthi izitha zakho zenzani ngendlela engafanele.
Njengokubandakanyeka kunoma iyiphi enye impi yokuncintisana, kungaba umqondo omuhle ngempela wokuwina lo mdlalo ngokuqonda ubuthakathaka besitha sakho. Futhi lolu hlelo luyinto engcono nakakhulu uma lisetshenziselwa ukuhlunga isikolo sakho se-SEO samanje. Ngakho-ke, unganqikazi ukusebenzisa kahle noma yikuphi okushiwo abaphikisi bakho - uma kufanele kube isu lokuqukethwe kwabo noma esinye isici se-Search Engine Optimization abasasisebenzisi ngokugcwele Source .